Chorizos na mmanya ọcha, a na-atọ ụtọ ma baa ọgaranya tapas iji nwee obi ụtọ. | Ntụziaka nri
Montse Morote | 08/06/2021 09:00 | Montaditos, Ntụziaka anụ
Chorizos na mmanya ọcha. Taa, m na-eweta usoro nri dị mfe ma na-atọ ụtọ, nnukwu skewer ma ọ bụ tapa, ọ bụ kpochapụwo maka ụbọchị okpomọkụ ndị a. enwere ike ime ya ezi chorizo ​​ma obu chistorra.
Na mmanya ọ bụla anyị nwere ike ịchọta tapa a, mana ịme ya n'ụlọ apụtaghị ihe ọ bụla ma ha dị ezigbo ụtọ. Naanị anyị ga-achọta chorizo ​​dị mma, ọ nwere ike ịbụ obere soseji ma ọ bụ buru ibu ma belata ha n'ime iberibe. Naanị ihe fọdụrụ bụ ịgbakwunye mmanya na-acha ọcha na nke ahụ. Nri dị mfe, nke nwere ike ịbụ maka nri nri, ma ọ bụ dịka onye mbido.
A skewer nke arụrụ n'ụlọ chorizo. Na echegbula achịcha !!! Enweghi ike iri tapa a ma obughi ezigbo ogbe achicha.
Ntụziaka ụdị: Agụụ
Chorizos ma ọ bụ chistorra 300 gr.
1 obere iko mmanya ọcha 150 ml.
1 n'ọnụ mmiri
1 dash nke mmanụ oliv
Iji kwadebe efere a nke chorizos na mmanya na-acha ọcha, nke mbụ anyị na-ebipụ chorizos n'ime iberibe ma ọ bụrụ na ha buru ibu, ị nwekwara ike iji chistorra, nke dị ntakịrị ma dị mma iji mee ka agụụ ahụ dị.
Anyị na-akwadebe ite frying na obere mmanụ, anyị ga-etinye ya na oke ọkụ. Mgbe ọ dị ọkụ anyị na-agbakwunye iberibe chorizo, anyị na-ahapụ ha ka ha sie nri ka ha hapụ obere mmanụ ma si otú a bụrụ na ha anaghị ete. Mgbe ahụ anyị na-agbanye ọkụ.
Ozugbo anyị buliri ọkụ ahụ, anyị ga-agba charizo n'akụkụ niile, soro site na ịgbakwunye akwukwo n'ọnụ mmiri na iko mmanya ọcha. Anyị na-ahapụ mmanya na-ekpo ọkụ.
Anyị na-ahapụ ya ka ọ sie nri niile maka nkeji ise na ọkara ọkụ ka chorizo ​​wee were ụtọ mmanya ahụ. Na njikere !!!
Enwe sausaji ndị a na-atọ ụtọ na mmanya ọcha !!!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » Ndi ibe » Montaditos » Chorizos na mmanya ọcha